Smashwords – Ny Jeneraly Tsara – a book by Dag Heward-Mills
Ny Jeneraly Tsara
Fantatrao ve fa ny fiainan'ny olona eto an-tany dia ady? Ao anaty ady isika na nisafidy ny ho ao anaty ady na tsia. Ny Baiboly no miteny fa ady ny fiainanao. Tsy maintsy miady ny ady tsara ianao ary mandresy ny ady. Ity boky vaovao momban' ny ady ity dia boky tsy maintsy vakian'ireo mpitarika rehetra.
Tags: daghewardmills books in malagasy malagasy malagache ny jeneraly